Maanta oo kala 27-kii December 2016 ayaa la dhaariyay xildhibaannada labada aqal ee Baarlamaanka 10-aad – Kalfadhi
Maanta oo kala 27-kii December 2016 ayaa la dhaariyay xildhibaannada labada aqal ee Baarlamaanka 10-aad
December 27, 2020 Hassan Istiila
Khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya ayaa maalinba maalinta ka dambeysa gadaal u riixaya jadwalka iyo taariikhda doorashada.
Maanta oo kala 27-kii December 2016 ayaa la dhaariyay xildhibaannada labada aqal ee Baarlamaanka, waxaana la filayay in xildhibaannada cusub ee Baarlamaanka 11-aad ay diyaar noqdan ka hor 27 bishan December 2020.
“Maanta ayay ku egtahay muddo xileedka Goleyaasha Barlamaanka. Duqa Farmaajo ahna 40 cisho ayaa ka hartay muddo xileedkiisa. Doorasho la isla ogolyahay iyo daruuftii lagu qaban lahaa ilaa hada midna nooma muuqato”, ayuu yiri xildhibaan Mahad Salaad.
“Farmaajo wuxuu yaqiinsaday doorasho xor iyo xalaal ah in uusan Madaxweyne mar labaad ku noqon karin. Sidaas daraadeed wuxuu go’aansaday in uu keligiis isku caano shubo ama dalka geliyo qalalaase siyaasadeed iyo mid amni”
“Lama yaabani Farmaajo oo waa nin garasho siyaasadeed ka arradan, guulwadeyaal sii luminayana ay hareerahiisa buuxaan. Lkn waxan waydiin lahaa NACAMLEYAASHA HAWIYE EE HAREERIHIISA DHOOBAN, ma sidaan ayay dan moodeen mise marka Farmaajo dalka iyo dadka dagaal geliyo, diyaaradna ka raaco ayay rakaabka diyaaradiisa kamid noqon doonaan?!”, ayuu sii raaciyay.
Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal (GHDHF) ee 2020/21, ayaa 26ka Diseembar, 2020 u kala diray dowlad-gobolleedyada xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya, habraacyada doorashada iyo foomamka ay u baahan yihiin inay buuxiyaan, dhammaan musharraxiinta doorashada kuraasta Aqalka Sare.
Musharraxiinta mucaaradka iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa muujinaya in guddiga doorashada uusan dhex-dhexaad noqon karin, waxaana ay sheegeen in dhinaca madaxweyne Farmaajo ay jiraan.
Guddiga doorashooyinka heer federaal oo shaaciyay habraacyada doorashooyinka 2020/21 ee Aqalka Sare iyo foomamka musharraxiinta
Wafdi ay hoggaaminayaan Xasan Sheekh iyo Guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee Aqalka Sare oo u ambabaxay Garowe